Goorma ayay Natiijada soo Bandhigi doonaan Gudigii Dowlada u xilsaartay Dhacdadii Bariire? – XAMAR POST
Goorma ayay Natiijada soo Bandhigi doonaan Gudigii Dowlada u xilsaartay Dhacdadii Bariire?
Gudiga ay Dowladda Soomaaliya u xil saartay dhibaatadii ka dhacday deegaanka Bariire ee gobalka Shabeelaha Hoose ayaa maanta lagu wadaa in ay soo gaba gabeeyaan Baaritaankooda kadibna ay warbixin u gudbiyaan Madaxda Dowladda Soomaaliya Warbixintaas oo ku aadan Weerarkii ka dhacay Bariire 25-kii Bishaan.
Ra’iisal Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo maalintii Sabtida ee 26-kii Bishaan ku dhawaaay gudiga oo ka kooban 5 Xubnood oo heer wasiir ah ayaa sheegay in Baaritaankooda iyo Waqtiga la siiyay Gudiga oo Shan maalmood ah uu ka bilaabanayo Maalintii Sabtida waxaana mudadaas ay ku egtahay maanta.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Gudiga ay soo gaba gabeeyeen Baaritaankooda maalinta biri ahna Shirka Golaha Wasiirada looga dhawaaqi doono Natiijada Baaritaakii ay Sameeyeen.
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow oo gudoomiye u ah Gudigaan ayaa Isbuucaan kulamo badan la qaatay odayaasha dhaqanka ee dadka ku dhintay weerarkaas sidoo kale waxa ay gudiga Baarayaal Xaqiiqo raadin ah ay dirsadeen todobaadkaan ay gaareen deegaanka Bariire lana kulmeen Maamulka Gobalka Shabeelaha Hoose, Maamulka deegaanka Bariire, Odayaasha deegaanka iyo Saraakiisha Ciidanka Dowladda ee ku sugan deegaankaasi.
Waxaa aad loo dhowrayaa Natiijada ka soo bixi karta Baaritaanka Gudigaan taas oo laba jeerba dhibaato wadata, Waa mare hadii ay gudiga taageeraan hadalkii dowladda ee ahaa in Al-shabaab la dilay waxaa dhici karo Isku dhacyo iyo Qal qal siyaasadeed oo ka imaanaya Ehelad dadkii la dilay oo sheegay in ay shacab ahaayeen Dadkii halkaasi ku dhintay.
Marka 2-aadna hadii ay dowladda Soomaaliya cadeyso in dadkii la dilay ay ahaayeen Shacab waxaa meesha ka baxaya hadaladii ay hore u shaaciyeen Wasiiro ka tirsan Xukumadda, waxa uuna hadalkooda noqonaya danbi kale oo shacabka laga galay sidoo kale waxaa dowladda dhaawac culus ka soo gaaraya kalsoonida Shacabka maadaama ay ciidankeeda dad shacab ah dhameeyeen.
Si walba oo ay ahaataba waxaa la sugayaa Natiijada Gudiga ay dirsatay Dowladda Soomaaliya ee baaritaanka ku soo sameeyay Weerarkii ka dhacay Bariire.
Dagaal Beeleed ka socda duleedka Magaalada dhuusamareeb ee G/Galgaduud.